Site na: KongoLisolona: April 13, 2019 00: 30 Enweghị asịsa
Otu dọkịta nyochachara nwa agbọghọ ahụ tupu agbamakwụkwọ ahụ ma kwenye na ụmụ ya ka dị. N'ịbụ onye na-enwe obi ụtọ maka ntụgharị uche ya, Brelyn Bowman ekwu banyere ya Instagram. Papa, ugbu a, kọwara Buzzfeed : "Ọ chọrọ ime m nsọpụrụ site n'igosi m na ọ dịghị nwoke metụrụ ya aka n'ihu di ya.»
Ụmụaka atọ nke pastọ nile bịanye aka na nna ha mgbe ha dị afọ 13, na-ekwe nkwa ịdị ọcha ruo mgbe alụmdi na nwunye. Naanị nwa nke ìgwè ahụ adịghị asọpụrụ nkwekọrịta ahụ. Mmeghachi omume nke onyinye a dị ịtụnanya, iji kpasuo iwe bụ otutu. Ụfọdụ na-eto eto nwa agbọghọ ahụ. "Nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ ihe kasị baa uru ya. »
Ndị ọzọ na-ese okwu ọ họọrọ: "Ọnụ anyị dị ka mmadụ enweghị ihe jikọrọ ya na hymen anyị ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ nke inwe mmekọahụ tupu ịlụ di ma ọ bụ nwunye," ka ọ na-agụ. Ma ọ bụ ọzọ: "Ụmụ nwanyị ndị na-amaghị nwoke na agbamakwụkwọ ha na-agbanyeghị ọcha ma ọ bụ ndị rụrụ arụ ma ọ bụ ndị na-ezughị okè. Ma gị, gịnị ka i chere?
Ọkt31 03: 06